Horror Poppy – Waa wakhtiga ciyaarta khiyaamada&Hack – Talooyin Cheats Android
Horror Poppy – Waa wakhtiga ciyaarta khiyaamada&Hack
Waa in aad ku sii noolaato naxdinta naxdinta leh/halxiraalahan. Isku day inaad ka badbaado alaabta lagu ciyaaro ee aargoosiga ah ee kugu sugaya warshada toy ee laga tagay ee Poppy Playtime. U isticmaal GrabPack kaaga si aad u jabsato wareegyada korantada ama aad wax kasta uga qabsato meel fog wakhtiga ciyaarta Poppy. Baadh xarunta daahsoon… oo haku qabsan Poppy Playtime : Cutubka 2.
Alaabta lagu ciyaaro ee Poppy Playtime. waa koox firfircoon! Laga soo bilaabo Bot ilaa Huggy, Catbee ilaa Poppy Playtime, Waqtiga ciyaarta ee poppy : Cutubka 2aad wuu wada sameeyaa! Ilaa iyo inta aad joogto Poppy Playtime., maxaad u bixin weyday alaabta ay ku ciyaaraan booqasho yar? Waxa laga yaabaa inaad samaysato dhawr saaxiib…
★ AQOONSIGA CIYAARAHA WAQTIGA POPPY ★
1. Argagax badbaado oo meel walba ku qarsoon!
2. Kaligiis ma sii ciyaari doono! Ciyaar oo wada guulaysta!
3. Hel abaalmarinno oo garaac dhibcaha saaxiibbadaa
4. La tasho khariidad gacanta lagu sawiray si aad u qorsheysato dhaqaaqaada xigta
5. Qaabab ciyaar-ciyaareed badan oo loo adkaysto
6. Si fudud loo ciyaaro ciyaarta wakhtiga ciyaarta poppy
Meta Data waa xuquuqda daabacaadda milkiilayaashooda. Codsigan waa codsi taageere ku salaysan oo aan rasmi ahayn ma aha wakhtiga ciyaarta Poppy ee dhabta ah : Cutubka 1 / Waqtiga ciyaarta ee poppy : Cutubka 2 Ciyaarta dhabta ah.
Ma jiro ku xad-gudub xuquuqda daabacaadda loogu talagalay, iyo codsi kasta oo ah in meesha laga saaro mid ka mid ah sawirada/logos/magacyada ( metadata ) waa la sharfi doonaa.
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: CheatsHack, Horror, Playtime, Poppy
← Poppy Playtime Horror – ciyaarta Tilmaamaha Khiyaamada&Hack Nolosha Mellow – Khiyaamo&Hack →